Instagram နှင့် Vine တို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုများပြုလုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်များ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Instagram နှင့် Vine ဖြင့်ဗီဒီယိုပြုလုပ်ခြင်းသည်ခက်ခဲသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ထိရုံနဲ့ ကိုင်လိုက် မှတ်တမ်းယူရန်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်ယူရန်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးခွဲစိတ်မှုကိုပြန်လုပ်ပါ။
သို့သော်၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်းများ၌အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးထူးခြားသောဗွီဒီယိုများပြုလုပ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Vine တွင် ၆ စက္ကန့်နှင့် Instagram ပေါ်တွင် ၁၅ ဆအချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားသည် တီထွင်ဖန်တီးမှု နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြစ်သော်လည်းလူအများစုကဗီဒီယိုရိုက်ရန်မဝံ့ကြပါသို့မဟုတ်မည်သို့စတင်ရမည်ကိုမသိကြပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောဖြစ်သော်လည်းထိရောက်မှုရှိနိုင်သည့်အဆင့်အချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေနဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့လုပ်နိုင်တဲ့ပုံသေနည်းတော့မရှိပါဘူး၊ လမ်းညွှန် ငါတို့မြှင့်နိုင်ပါတယ် အရည်အသွေးမြင့် ငါတို့ကမ္ဘာကိုပြချင်တဲ့အလုပ်ရဲ့။
အကြံဥာဏ်တစ်ခု ဝတ္ထု စိတ်ဝင်စားစရာကမည်သည့်ဗီဒီယိုအတွက်မဆိုအရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်နိုင်သည် - ဥပမာလမ်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရပြီး၎င်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအားပေးသည့်အရာ - သို့မဟုတ်အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည်၊ အရေးကြီးသောအယူအဆတစ်ခုမှစတင်ရန်ဖြစ်သည် မူရင်း။
ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဘောင်းဘီတိုများကစီစဉ်နေကြသည် ကျောက်တုံး, သင်ရိုက်ကူးချင်သောအရာနှင့်အသုံးပြုမည့်ကင်မရာထောင့်အပြင်ယင်းကရရှိမည့်အရှိန်အဟုန်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သောဗီနင်အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဗွီဒီယိုတစ်ခုအားဤမျှတိုအောင်ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ချင်သည့်အရာနှင့်မည်သို့ပြုလုပ်လိုသည်ကိုစိတ်ကူးထားရန်လိုအပ်သည်။ မည်မျှမည်မျှချရေးထားသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချရေးပါ ဖြတ်တောက် မင်းကမှတ်တမ်းတင်ဖို့လုပ်ရမှာပေါ့။
ဗွီဒီယိုကြည့်နေစဉ်ရုပ်ပုံအနည်းငယ်သာနှောင့်ယှက်စရာမရှိပါ တည်ငြိမ်သော။ မှန်ပါသည်၊ ဤဗီဒီယိုများ၏ဆွဲဆောင်မှုမှာ၎င်းတို့သည်အလွန်အကျွံပြင်ဆင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏စက် မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်သင်၏ဗွီဒီယိုအားပိုမိုထိရောက်သောထိတွေ့မှုပြုလုပ်လိုပါက tripod သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်များနှင့်မျိုးကွဲများစွာရှိသည်။ သင်တစ်ခုလိုချင်လျှင်ပြnoနာမရှိပါ။
မည်သည့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုတွင်မဆိုကောင်းသောဘောင်တစ်ခုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဗွီဒီယိုများသည်စတုရန်းပုံသဏ္haveာန်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိရသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပုံရိပ်ထဲမှဘာမှမကျန်စေရန်ကောင်းမွန်သောဘောင်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
စပျစ်နွယ်ပင်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း ထိန်သိမ်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းတွင်ရှိသည့်အရာဝတ္ထုများ၏နေရာချထားမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်3×3။ မင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင် အသုံးပြုရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်.
အိမ်ဗီဒီယိုများတွင်အမှားအယွင်းများသည်အလင်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာလင်းမြင်သာသောမြင်ကွင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုသည်အတော်ကြည့်ကောင်းသည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည် သစ်အယ်သီး။ ns light သည်အပြင်ဘက်အချက်များကြောင့်လည်းဖြစ်သဖြင့်၎င်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအဖြစ်ကြိုးစားရန်လိုသည်။
Vine နှင့် Instagram တို့မှအဖြူချိန်ခွင်လျှာထိန်းချုပ်မှုကိုမပေးသောကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုမီယင်းကိုပြင်ဆင်ပါ အရေးပါသောအ.
ဗွီဒီယိုကိုအသံနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်လေ၊ နေရာတွေနဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရမယ် စည်ကားကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်မဟုတ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ၏မိုက်ကရိုဖုန်းသည်ကောင်းသော်လည်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးဘက်စုံသုံးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကင်မရာတွင်တပ်ဆင်နိုင်သောမျက်ကပ်မှန်မြောက်များစွာရှိသည်။ ကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါတယ် Olloclip၎င်းသည်တစ်ခုစီတွင်သုံးခုဖြစ်သဖြင့်ငါးမျှားခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်သောထောင့်နှင့်မက်ခရိုနှင့်အတူပါရှိသည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်
ပျော်စရာ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောနှစ်သက်ဖွယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကကြည့်ရှုသူများအားကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်စစ်ဆေးရန်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်မထုတ်ဖော်ချင်သောအံ့သြစရာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိပါကကိတ်မုန့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဟုတ်ကဲ့«ခုတ်»ကြည့်ရှုသူထံသို့။
Instagram ပေါ်မှာငါတို့လုပ်နိုင်တယ် တင်သွင်း ဗီဒီယိုများ၊ ဒါဆိုငါတို့ကဒီထက်ပိုတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် stopmotion စတာတွေလုပ်ချင်ရင်…အဲဒီမှာငါတို့ရွေးစရာရှိတယ်။
Vine - Instagram ဖြင့်ဗွီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေပါသနည်း။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - iOS ရှိထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်ချက် ၅ ခု
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » Instagram နဲ့ Vine ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေကို pro လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဒါကအချည်းနှီးမဟုတ်ပေမယ့်ပို့စ်နဲ့တူပုံရသည်။ ငါဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူး၊ ငါထုတ်ဝေဖို့ပို့စ်တစ်ခုငါဖန်တီးမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်း။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုများပြုလုပ်ရန်အကြံပေးချက်များကိုချန်ထားလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ ဗီဒီယိုပြုလုပ်ခြင်းသည် Instagram (သို့) ငါနှင့်သာမပတ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် app နှင့်မဆိုကောင်းသောဗီဒီယိုနှင့် instagram နှင့် voila တို့အတွက် ၂၀ စက္ကန့်ခန့်ဖန်တီးပါ။